Fanafahana ireo mpangala-jaza teto Toamasina: “Tsy heloka ny fikasana hangala-jaza…” hoy ny Tonia mpampanoa lalana - Midi madagasikara du 12 mars 2018 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Corruption Madagascar Fanafahana ireo mpangala-jaza teto Toamasina: “Tsy heloka ny fikasana hangala-jaza…” hoy ny...
Nanaitra ireo mpahay lalana eto Toamasina, ny fanazavana nomen’ny tonia mpampanoa, mikasika ny fanafahana vonjimaika ireo voarohirohy ho mpangala-jaza, ny talata 6 martsa 2018 teo. “Tsy heloka ny fikasana hangala-jaza izany , satria mbola tsy tontosa ny heloka, hatreto ihany koa teto Toamasina tsy mbola nisy ray aman-dreny nitory sy nitaraina fa very ny zaza”, hoy Rajaonah Thierry Lauret, tonia mpampanoa lalana ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Toamasina. Mbola nohamafisiny fa “mbola tsy nisy ny halatra sy varotra natao tamin’ity raharaha ity, ka tsy mitombina ny heverina fa heloka tamin’izao hala-jaza izao. Noterena hanaiky ny heloka tsy nataony izy ireo teny amin’ny polisy raha nanao ny fanadihadiany ny mpitsara manadihady”. Ho an’ireo ray aman-drenin-jaza, ao anatin’ny 3 taona hatramin’ny 16 taona, tafiditra tao anatin’ilay someso nifanaovan’ireto mpangalatra sy mpivaro-jaza nahazo fahafahana vonjimaika ireto ary amidy 3 hatramin’ny 9 tapitrisa ariary, dia nomarihan’izy ireo, fa “miteraka horohoro anay ny zava-misy, saingy izay moa ny fanapahan’ny mpahay lalana malagasy ka afaka hanao inona amin’ireo debaben’ny fitsarana ireo ny vahoaka madinika”. Na izany tsy manaiky milefitra amin’ny ambaran’izy ireo, fa “didin’ny mpahay lalana” izao ireto ray aman-dreny tafaresaka tamin’ny mpanao gazety, ka sahy nilaza mihitsy fa “hisy ny fitsaram-bahoaka, satria tsy hanaiky hanaovana fitadiavam-bola amin’ny zanakay izahay na hidiranay am-ponja aza”. Telo andro taorian’ny famotsoran’ny fitsarana ilay enina mianadahy voarohirohy ho manao tamba-jotra na mpangala-jaza eto Toamasina, dia nisy tranga voalohany niseho tao Andranomadio amin’ny lalam-baovao, ny zoma 9 martsa teo tokony ho tamin’ny 5ora hariva. Zazalahy iray avy nianatra namonjy fodiana no nisy lehilahy roa niantso fa hoe misy zavatra omen’izy ireo azy. Mailo anefa ity zazalahy ity, dia tsy nanatona sy nanohy ny lalany tamin’ny hazakazaka. Hagagana ny an’ny ray aman-dreniny nony tonga tao an-trano izy, ka nanontany azy nefa raha niezaka nanara-dia ireto lehilahy roa ireto izy ireo, dia efa tsy hita ny nisy azy roa lahy. Ny hany tadidin’ilay zazalahy fotsiny, dia mikavin’ila ny iray tamin’izy ireo. Ankoatra izay, dia nilaza ny talen’ny filaminana anatiny eto Toamasina fa “efa porofo azo itarihana ny fanadihadian’ny fitsarana ny someso voaray ho porofo; koa raha misy ny fangatahana fanampim-panadihadiana, dia anjaran’ny fampanoavana ny manome baiko ny polisy”. Ho an’ Andriamihangy Georges Florence, tonia mpampanoa lalana ambony eto Toamasina kosa, nilaza izy fa tsy mahalala ity raharaha ity , satria tsy nisy tatitra azony na tamin’ny polisy, na tamin’ny mpitsara.
Article précédentSeconde plainte d’Houcine Arfa – dés révélations explosives – La gazette de la grande île du 12 mars 2018
Article suivantAffaire Houcine Arfa – Patrick Raharimanana convoqué à la gendarmerie – La vérité du 13 mars 2018